Kenya oo Sheegtay Inay Dishay 57 Dagaalyahan oo ka Tirsan Ururk Al Shabaab - Hablaha Media Network
Kenya oo Sheegtay Inay Dishay 57 Dagaalyahan oo ka Tirsan Ururk Al Shabaab
HMN:- Ciidamada dalka Kenya ayaa ka hadlay dagaal ay maanta Ciidamadooda oo garab ka helaya kuwa dalka Mareykan ay ku qaadeen Dagaalyahano ka tirsan ururka Al-shabaab oo ku sugnaa duleedka degmada Afmadow ee Gobolka Jubadda Hoose.
Afhayeenka Ciidanka Kenya Joseph Owuoth ayaa warbaahinta dalka Kenya waxa uu u sheegay in Ciidamadooda dagaal ay maanta la galeen Al-shabaab ay ku dileen 57 Dagaalyahan oo ka tirsanaa Shabaab.
Afhayeenka ayaa sheegay in weerarku uu ahaa mid cir iyo dhul ah oo gaadmo ahaa, ayna saakay 08:45 Daqiiqo ah ku qaadeen xarun ay ku sugnaayeen Dagaalyahano ka tirsan ururka Al-shabaab.
Waxana uu yiri Afhayeenku “Waxaan dilnay 57 ilaa 55 Askari oo ka tirsan Shabaab, weerarku waxa uu ahaa mid xoogan, maadaama Ciidamo is garab sanayay ay qaadeen, Ciidamadeena feejignaan dheeri ah ayay muujiyeen”.
Waxana uu sheegay Ciidamadooda khasaaraha soo gaaray in uu yahay mid kooban, oo tiro yar ah, maadaama Ciidamada ay ahaayeen kuwo Dagaalka diyaar u ahaa, wuxuuna tilmaamay in ay sii wadai doonaan Dagaalka noocan ah oo ay ku beegsanayaan ururka Al-shabaab.